Jubadda Hoose, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Jubadda Hoose, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
MSF waxa ay daryeel caafimaad oo aasaasi ah, mid sare iyo mid degdeg ahba ka bixisaa magaalooyinka Mareerey iyo Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
MSF waxa ay leedahay waax bukaan-socod, waax bukaan-jiifka carruurta ah, iyo waax hooyooyinka/haweenka oo ay shaqaalaha caafimaadku ku buxiyaan adeegyada ka umulinta, oo ay ku jiraan daryeelka uurreyda iyo umulaha, cunto ku daweynta iyo quudinta dheeriga ah, qalliin, adeegyada bukaan-socod-eegtada ee daaweynta iyo ka hortagga iyo kuwa daaweynta qaaxada. Sanadkii 2009kii, 35,6444 qof ayaa la siiyey la-talin iyo daaweyn lacag la’aan ah, oo ay ka mid ahaayeen 12,756 carruur ay da’doodu ka yar tahay shan jir. 1,308 qof ayaa la dhigey cusbitaalka oo lagu daweeyey waxaana 2,882 carruur ahi ay ku heleen daryeel nafaqeyn. Bishii Agoosto 2009kii, MSF waxa ay ku guuleysatey in waxqabadyadii qalliinka degdegga ahaa ka bilowdo Mareerey ka dib markii ay shaqaaleysey gabar-dhallinyar oo dhakhtarad Soomaaliyeed ah oo ka soo qalin-jebisey Jaamcad caafimaad oo ku taalla Muqdisho dhammaadkii 2008dii. Shantii bilood ee ugu dambeysey 2009ka, waxa ay sameysey afar qalliin oo ay haween kaga umulisey iyo 67 qalliin oo yaryar. Magaalada Jilib ayaa MSF ay ku khasbanaatey in waxqabadyadii nafaqeynta ay bishii Agoosto 2009ka u joojiso nabadgelyo-xumo, iyada oo halkaa kaga carruur ay hayso nafaqo-xumo ba’an iyaga oo aan heli karin daryeelkii caafimaad ee ay u baahnaayeen. Dhammaadkii 2009kii MSF weli awood uma yeelan in ay waxqabadyadeedii dib uga bilowdo Jilib.
MSF waxa ay maamushaa waax bukaan-socod, waax bukaan-jiif, oo daaweysa xaaladaha caafimaad iyo kuwa uurreyda iyo umulaha, oo ay ku jiraan daaweynta nafaqo-xumada ba’an; baaritaanka nafaqada iyo daryeelka bukaan-socodka, waxaana ay si nidaamsan ula socotaa xaaladaha degdegga ah ee nafaqada iyo cudurrada dillaaca. Bishii Nofembar 2009kii ayaa waax cusub oo daryeelka ka horreeya dhallidda ay ka furtey Jamaame halkaas oo haweenka uurka leh ay ku heli karaan daryeelka la-talinta caafimaad ee uurreyda oo lacag la’aan ah oo tayana leh. Sanadkii 2009kii, 1,572 bukaan ayaa la dhigey waaxda bukaan-jiifka si loogu daweeyo. 43,828 qof ayaa la-talin caafimaad iyo daaweyn lacag la’aan ah ku heley waaxda bukaan-socodka, kuwaas oo ahaa laba-laab kuwii lagu daweeyey sanadkii ka horreeyey iyada oo bukaanno badan ay cusbitaalka kaga imanayey gobollo kale si ay u helaan daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah oo tayona leh. Carruur wadartoodu gaareyso 1,938 oo ay hayso nafaqo-xumo ayaa la daweeyey sanadkaa gudihiisa.
Wararkii ugu dambeeyay ee Mashaariicda MSF ee Jubadda Hoose